निर्मल निवास रित्तो पारेर किन गए ज्ञानेन्द्र सपरिवार द्वारिकाज होटल ? – Etajakhabar
निर्मल निवास रित्तो पारेर किन गए ज्ञानेन्द्र सपरिवार द्वारिकाज होटल ?
काठमाडौं । मान्छेले गर्मीमा चिसो खोज्नु र हिउँदमा न्यानु खोज्नु त स्वाभाविकै हो । तर, पूर्वराजा ज्ञोनेन्द्रले राजधानीमा चिसो बढीरहँदा काठमाडौंभन्दा बढी स्याँठ हानिने घुलिखेलको पाखा रोजेका छन् । निर्मल निवासमलाई सुनसान पारेर ज्ञानेन्द्र परिवारका सदस्य पारसबाहेक सबैले चार रात, पाँच दिन होटर द्वारिकाजमा विताए ।
उनीहरु गत ६ गते बुधबार त्यहाँ पुगे भने १० गते आइतबार काठमाडौं फर्किए । काठमाडौंको द्वारिकाजको शाखा रहेको घुलिखेलको उक्त होटलकी मालिक्नी संगीता श्रेष्ठ आफै खातिरदारमा जुटेकी थिइन् । पहिलै आएका विदेशीबाहेकका पाहुनालाई छिर्न दिइएन ।जनआस्था साप्ताहिकबाट
उक्त भ्रमणमा ज्ञानेन्द्रका परिवारका सदस्य बाहेक पुर्वनिजी सचिव सागर तिम्सीना थिए । होटलमा उनका निम्ती अलग्गै कोठा थियो भने सुरक्षाकर्मीलाई तीनवटा कोठा छ्ट्याएको थियो । ज्ञानेन्द्र एक महिना पहिला पनि परिवारका साथ त्यहाँ पुगेका थिए । यसचोटीको बसाईका क्रममा उनले केही राजावादी र व्यापारीहरुसँग भेट गरे । केही व्यापारी साँझ भेट्न पुग्थे भने गैरव्यापारीहरु दिउँसो पुगेका हुन्थे ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १३, २०७४ समय: १२:३३:५३